Tafaverina ny basy: tratra ireo dahalo enin-dahy nahafaty zandary | NewsMada
Voasambotra tao amin’ny toerana atao hoe Menamaty, faritr’Ihorombe ny dahalo enin-dahy namono ilay zandary prinsipaly kilasy II, maty nandritra ny fifandonana tao Satrokala, Ihosy, ny herinandro lasa teo. Sarona teny amin’ireto dahalo ireto ny basin’ity zandary namoy ny ainy ity, ankoatra ny fitaovam-piadiana hafa.
Dahalo enina tratra, voalaza fa tompon’antoka tamin’ny fahafatesan’ny zandary kilasy faharoa, ny herinandro ambony lasa teo, tany Satrokala, distrika Ihosy. Tratra tany Menamaty Ilodo faritra Ihorombe ireo dahalo ireo, ny faran’ny herinandro teo. Mbola hita tany amin’ireo olona enina ireo ny basin’ilay zandary. Nahitana fitaovam-piadiana hafa toy ny basim-borona sy basy vita tanana ihany koa tany amin’izy ireo. Hanaovana fanadihadiana ary hatolotra ny fitsarana tsy ho ela. Ity zandary ity izay matin’ny dahalo nandritra ny fanarahan-dia nataony niaraka tamin’ny fokonolona. Tratran’ny vela-pandriky ny dahalo izy ireo ka taraiky ity zandary ity, raha afaka niaro tena ny namany. Lasan’ny olon-dratsy ny basiny taorian’izay. Nandeha ny fikarohana ka tratra ireto olona enina ireto.
Marihina fa vao ny herinandro teo no nisy zandary roa matin’ny dahalo tany Antsaido Bedao, distrika Maintirano. Nandritra ny fiarovana ireo mpiasan’ny Instat dimy miarahalahy niasa tany an-toerana no nahatonga izany. Sendra ny be no ho ny vitsy ireo zandary ka izao matin’ireo dahalo izao. Mandeha ny fanadihadiana momba ireo tompon’antoka tamin’ny fahatesan’ireo zandary roa lahy ireo.
Maro ny zandary maty
Maro ny dahalo maty am-perinasa tamin’ity taona ity. Hanao ny tomban’ezaka sy ny tatitra momba ny asa vitan’izy ireo. Azo lazaina fa taona mainty ho an’ny zandary mihitsy satria betsaka ny maty am-perinasa. Ny dahalo izay mihantsy ary manao karazana valifaty mihitsy amin’ny asa ratsy ataony. Raha ny tranga farany teo, tany Maintirano, nilaza ny avy amin’ny zandarimaria fa efa nomanina mihitsy ny fanafihana ireo zandary fa tsy fifandrifian-javatra. Milaza ny tsy hamela mora ireo nahavanon-doza ny zandary.